Cluster: Kubatana Maitiro Ekukudziridza Rako Bhizinesi | ECommerce nhau
Munyika yanhasi yezvehupfumi, uye nekuwedzera kuwanda, makambani anowanzo batirana pamwe nekugadzira mapoka, masumbu uye / kana kushamwaridzana nemamwe makambani kana masangano. Kazhinji, nekuda kwechimiro chechimiro cheaya maitiro, makambani ndezvavo kana kukudziridza chiitiko chavo mundima imwechete zvakananga kana zvisina kunangana, kana iyo imwecheteyo nzvimbo yenzvimbo. Ichi chiitiko chinodanwa zita remabhizimusi masumbu.
Sumbu riripo uye rakagadzirwa kuitira kuti makambani agone kubatana mukugadzira, kugadzira kana kupa masevhisi ayo mumwe nemumwe aisagona. Pane dzimwe nguva, ivo vanoteedzera kubatsirwa kwehupfumi, kana kuwana kune dhatabhesi, nezvimwe. Zvichienderana nerudzi rwekambani iri, chikonzero chemubatanidzwa chichava chakasiyana. Uye zvakare, ivo vanokwanisa kusanganisira mumatanho avo mayunivhesiti, nzvimbo dzekutsvagisa uye nheyo dzinovatendera kuti vagadzirise pavanenge vachipa mari kumisangano imwechete. Tichataura nezve izvi zvese nhasi, masumbu senge zano mubhizinesi renyika.
1 Ndezvipi zvinangwa uye mabhenefiti anowanikwa mumasumbu?
2 Mhando dzemasumbu ebhizimusi
2.1 Masumbu ematunhu
2.2 Chikamu Masumbu
2.2.1 Technology sumbu
2.2.2 Value cheni sumbu
2.2.3 Maindasitiri sumbu
2.2.4 Sumbu re «factorial endowment»
2.2.5 Nhoroondo yekuziva-masumbu
3 Mienzaniso yemasumbu ane mukurumbira
Ndezvipi zvinangwa uye mabhenefiti anowanikwa mumasumbu?
Masumbu ane awo senge makuru kugona kukanganisa makwikwi. Kugadzirwa kwayo, iyo isiri nguva dzose chivimbo chebudiriro (zvinopesana nezvinowanzotendwa), ine mhedzisiro yayo kuvandudza mabasa ayo, nekuda kwekufukidzwa uye kugadzikana kunopihwa nekubatana pakati pemakambani.
Isu tinowana kuwedzera mukugadzirwa pakati pezvakanaka zvikuru. Uyezve zvimwe zvinogara zvichiratidzika uye kukurudzira kwemakambani mukati memunda. Panguva imwecheteyo, hunhu hunogona kuve mukana hunoderedzwa, uye kumanikidza kwekubatana mukati memakambani kunowedzerwa.
Mhando dzemasumbu ebhizimusi
Kambani yega yega, chikamu chega chega, nzvimbo yega yega, inogara ichisanganisira zvinangwa zvakasiyana kana nzira dzekuita zvinhu. Sezvataona kare, masumbu anozvarwa kubva pakuda kubatana nemamwe makambani ari padyo kuti awane zvirinani. Zvichienderana nerudzi rwekuswedera kana chimiro, tinowana masumbu akasiyana anozove anotevera.
Mune zviitiko izvi, makambani anoshandira pamwe nemumwe, nekuda kwehukama hwavanochengetedza. Izvo hazvina kukosha kuti ivo ndevechikamu chimwe chete. Semuenzaniso, tinogona kuwana makambani anoshanda pamwe nemasangano, mamasipala, masangano emari, umo nekuda kwekuswedera kwavo, vanogona kuchengetedza mubatanidzwa unobatsira zvese. Kubva pano, ivo vanogona kuita zvakajairika chirongwa, kana kuve nemasevhisi ayo ayo mamwe kana mamwe makambani anopa.
Makambani ayo ndezve chikamu chimwe chete uye sarudza kushamwaridzana kuti ubatanidzane pamusika wavakatsaurirwa. Semuenzaniso, makambani esoftware anoshanda pamwe nevamwe mukuvandudza marobhoti.
Masumbu echikamu anofukidza huwandu hwakawanda hwezviitiko zvine chekuita nemunda mune makambani ari kuita, nekuti basa ravo rine hukama. Muboka iri, saka, tinowana maviri makuru marudzi atinogona kusiyanisa zvinoenderana nedanho kana chinongedzo checheni yavanogara.
Vertically revatema sumbu: Mune izvi Maindasitiri akabatanidzwa zvinoenderana nezinga ravo muketani yekupa. Semuenzaniso, tinogona kuwana chigayo chemapepa chinogadzira bepa kubva mukuchichinjazve kana miti, iyo inoshanda semupiki neimba yekutsikisa, uko izvi zvichizogovera mabhuku ayo kumamwe mafemu kana zvitoro. Isu tinogona kuwana zvakanyanya kuomarara nemotokari indasitiri, kubva mukushandira pamwe mukusimudzira uye kugadzirisa tekinoroji, kutengesa mota, vatengesi vezvinhu zvakagadzirwa, nezvimwe.
Masango akabatanidzwa akaenzana: Maindasitiri ayo vanogovana mhando imwe chete yevatengi, zvigadzirwa kana masevhisi, zvakafanana mbishi zvigadzirwa, nezvimwe. Izvo zvinonzi dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo, "kufambisa keke."
Masumbu emasekondi, kunze kwekubatanidzwa kwawo, akapatsanurwa zvichienderana nerudzi rwehukama hwavanochengeta pakati pavo. Sezvatatsanangura, zvido zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ezvinhu makambani aanozviwana.
Ruzivo isimba, uye tekinoroji chikamu ndicho chinowana mukana zvakanyanya kubva pane izvi. Ivo vanowanzo shanda nemayunivhesiti nenzvimbo dzekutsvagisa, uko kwavo kwemari kunoita kuti vashande, uye mukudzoka vanovapa iwo matsva ekuvandudza uye zvigadzirwa kuti zvigadzirwa zvavo zvirambe zvichichinja.
Value cheni sumbu
Wakambonzwa nezve zvigadzirwa zvemuno? Ipapo iwe unogona kuwana zano. Aya ndiwo maindasitiri ayo nekuswedera kwaro Zvinobatsira kwavari kutenga nekutengesa zvigadzirwa zvavo kana masevhisi, pamusoro pekuve padyo nevangangove vatengi.
Ndiyo mhando inoitirwa kugadzirisa makwikwi angave nawo kumakambani. Kuedza kubatsirwa nebhizinesi symbiosis inogona kubuda, senge kudzikisa mitengo, kuona kutengesa, kugadzirisa kugadzirwa, nezvimwe. Iyo ndiyo yakajairika, uye imwe yeaya anogona kuvhara zvakanyanya munda. Zvinogona kuitwa pakati pemakambani, masangano, masangano uye tinovawana mune angangoita ese zvikamu. Mining uye mafuta, mota, indasitiri yemachira, zvekurima, zvigadzirwa, uye chero kupi uko imwe kambani inoda imwe kuti ishande.
Sumbu re «factorial endowment»
Aya mapoka ari yakatarisana nekuvapo kwekuenzanisira zvakanaka. Zvinogona kuve zvine hukama nenzvimbo dzenzvimbo dzenzvimbo. Semuenzaniso, indasitiri yesalmoni muChile.
Pane makambani akaita zviitiko zvechivanhu kwemakore mazhinji uko nzira dzekuita nekusimudzira dzakanyatsojeka. Mune zvimwe zviitiko, iwo mazana emakore maindasitiri ekare, senge mamwe mabasa emaoko. Tichifunga nezvehunhu hwavo hwakasiyana, zvinowanzo kuve zvakakosha kuti vagadzire masumbu ekugadzirisa uye kuchengetedza nzvimbo yavo
Mienzaniso yemasumbu ane mukurumbira
Silicon Valley: Mumakore makumi mapfumbamwe, makambani akabudirira munyika yehunyanzvi akabuda muchikamu chino cheCalifornia. Izvi zvakatungamira kune chero munhu aida kuvhura kambani, achisarudza ino nzvimbo. Venture capital mari inotama kana kuwedzerwa muSilicon Valley, ichikwezva kufarira kwevemabhizimusi mazhinji kuvhura mabhizinesi avo matsva ipapo. Zvese izvi zvakakonzera kusheedzwa kwemabasa, mukati mawo mainjiniya, mapurogiramu uye masayendisiti emakomputa, vakaona kuti vaizove nemukana uri nani wekuwana basa rakanaka ipapo. Yese iyi mhinduro yemhepo yakatungamira Silicon Valley kuve quintessential sumbu munyika yehunyanzvi.
Hollywood: Iyo firimu indasitiri uye mafirimu studio. Isu tese tinozviziva, nekuve chirevo chekuti mafirimu akanaka mazhinji abuda imomo.
Madrid Network: Network yemakambani enharaunda yeMadrid.
Guta: Chikamu chakakura chinounza pamwe makambani kubva mubazi rezvemari muLondon.
Kuve nemukana uye kufunga nezvekuva mumwe wesumbu chisarudzo chakakura, icho chingangounza mabhenefiti kukambani yedu. Nekudaro, kwete nekuve yavo uye nekuzorora, zvese zvinoitwa. Kuva kune imwe zvakare kunoreva kuyedza uye kukosha iyo iyo kambani inogona kuwedzera, ichivandudza kukwikwidza sezvataona. Dzimwe nguva masumbu anogadzirwa chete nekuda kwemitero, sezvakanaka, kana nekuti zvinofungidzirwa kuti nekubatanidza mamwe makambani, ivo vanenge vatopa zvakanakira.
Sezvose, iwo sarudzo dzinofanira kuongororwa, uye kwete chete kuona kuti isu tinokwana sei mukati, asi kuti tinokwana sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Cluster: Kubatana nzira dzekukudza kambani yako